रोचक Archives - Page2of4- Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
यौन सम्पर्कले अनिच्छित गर्भ बसेकाले हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने अब महिलाले मात्र होइन पुरुषका लागि पनि गर्भनिरोधक कण्डमको विकल्पमा इन्जेक्सन प्रयोग गर्न सकिने
अचेल युगल जोडी प्रेमिपे्रमिका मात्र होइन दम्पती पनि अनिच्छित गर्भ रहनाले महिलालाई जवरजबस्ती गर्भ पतन बाध्य हुनुु पर्ने अवश्था छ । पुरुषका लागि सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध हुने कण्डम प्रयोगमा झण्झड हुने भन्दै प्रयोगमा हिच्किचाहटले अनिच्छित गर्भ वसी महिलालाई असिम पीडा मात्र होइन यौन प्रजनन् स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यौन सम्पर्कपछि नचाहँदा(नचाहँद पनि कतिपयको ग...
पाकिस्तानी गायिका पिर्जादाको यौन गतिविधि सहितको गोप्य भिडियो बाहिरिएपछि पाकिस्तानमा तनाव
इस्लामाबाद १ मंसिर । पाकिस्तानी गायिका रबी पिर्जादा यौन गतिविधि सहितको भिडियो सार्वजनिक भएपछि तनावमा छिन । भिडियो भिडियो भाइरल भएपछि उनले भर्खरै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छन् । आफ्नो व्यक्तिगत भिडियो तथा फोटो सार्वजनिक गर्ने दुईजनालाई सरकारी अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरिसकेको उनको दावी छ । गायिका रबीको दुई साताअघि यौन गतिविधि सहितको भिडियो र फोटो ‘लिक’ भएको थियो । आफू...
शरिर भरी शिक्का, २८ किलोको ज्यानमा २० किलो सिक्का
पोखरा हेम्जाका करिब ५० बर्षिय रामबहादुर परियार यतिवेला शिक्का बाबाले टोलमा परिचित छन् । उनको शरिरमा लगाउने लुगामा उनले २०६ देशका शिक्का टाँसेका छन् । उमेरले ५० नाघेका शिक्का बाबाको तौल भने २८ किलो ग्राम मात्रै छ । उनले लगाउने लुगामा टाँसिएको शिक्काको तौल भने २० किलोको रहेको छ । कपडा भरी शिक्का टाँसेर हिड्नु उनको रहर भने होइन शरिर भरी शिक्का टाँसेर अनौठो काम गरेर समाजमा चिनिनु छ उनलाई । उ...
चाणक्य नीति भन्छ : यदि आफनो सामुन्ने प्रशंसा गर्ने,कण्डो पछाडि कुरा काट्ने मित्र छ भने उसँगको संगत आजबाट नै छाड्नुहोस्
सवैको जीवनमा संगत एवं साथीको महत्व अधिक हुन्छ । सवैको आआफ्ना किसिमको सम्बन्धहरु हुन्छ, जीवन विताउने सिलसिलामा अनेक किसिमका साथीहरुसँग नाता जोडिन पुग्छ । स्वाभाविक रुपमा जीवनमा कस्तो साथी बनाउने ? कस्तो व्यक्तिको संगत गर्ने ? भन्ने कुरा व्यक्तिको निर्णयमा भर पर्दछ । त्यसैले तपाईसंग हजारौं संख्यामा ठोकिन आइपुगेका व्यक्तिहरु साथी बनाउन सम्भव छैन् । तसर्थ कस्तो व्यक्तिसँग संगत गर्ने ? कस्तो ...
कम्तीमा तीन ओटा कण्डम किन बोक्छन ट्याक्सी चालक
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ट्याक्सी चालकहरुले अनिवार्य कण्डम बोकेर हिंड्नै पर्ने भएको छ । कण्म नबोक्ने ट्याक्सी चालकलाई ट्राफिकले कारवाही गर्ने भएपछि ट्याक्सी चालकले अनिवार्य कन्डम बोक्नै पर्ने भएको छ । यो समाचार अहिले सञ्चार माध्यमहरुमा निक्कै भाइरल भएको छ । कतिपय भारतिय स्थानीय सञ्चार माध्यमले कम्तिमा पनि तीन ओटा कण्डम ट्याक्सी चालकले बोक्नै पर्ने भएको उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्यमा ध्य...
घरपालुवा जनावरसंग १० मिनेट समय विताएमा तनाबबाट मुक्त,स्वास्थ्यको दृष्टिले फाइदा फाइदै
टोकियो,घरपालुवा जनावरसंग समय विताउने कलेजका विद्यार्थीहरुको मानसिक अवश्था राम्रो भएको भेटिएको छ । ताकी उनीहरुको तनावको तह कमी हुन गई दैनिकीमा सहयोग पुगेको छ । एक अध्ययनले दावीका साथ भनेको छ अक्सर विद्यार्थीहरु अध्ययन तथा परीक्षा तयारीको बेला बढी तनाव लिने गर्छन् । यहिँ विषयमा वाँशिंगटन स्टेट युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले अध्ययन गरेका हुन् । अधिकतर युनिवर्सिटीजद्धारा ‘पेट योर स्ट्रेस...
एक १९ बर्षीया किशोरीमा दुई योनी भेटियो, डाक्टरहरु भन्छन ‘दुर्लभ घटना’
बेलायत । एक १९ बर्षीया टिनेजर्समा दुईवटा योनी भेटिएको छ । बेलायत गिलिङघाम केन्टस्थित १९ वर्षीया किशोरी मोली रोज टेलरमा दुई ओटा योनी भेटिएको हो । उनीमा महिनावारी समस्या थियो । महिनावारीमा समस्या भएपछि अस्पताल गएकी थिइन् । डाक्टरले उपचारको क्रममा मोलीको दुईवटा योनी भएको पत्ता लगाएका थिए । उनले केही वर्षदेखि महिनावारी निकै पीडादायी भएको बताउँदै आएकी थिइन् । चिकित्सकले भने यस घटनालाई अ...
महाभारतको एक घटना : अर्जुनले केही गर्दा पनि हराउन नसकेका पात्र हुन् –वनवासी उर्फ किरात शिवजी
हाम्रो मानसपटलमा महाभारतको विषय आउने वितिकै कौरव र पाण्डवीचको युद्धले प्रवेश पाइहाल्छ । कौरव र पाण्डववीच युद्ध हुने वेला थियो । अर्जुन भने महाभारतको युद्ध हुन अगाडि देवराज इन्द्रको दिब्य शास्त्र पढ्न चाहान्थें त्यसैले अर्जुनले इन्द्रको शरण लिन अनेकौं प्रयास पछि उनले इन्द्रलाई भेट्न पुग्यो र अर्जुनले इंद्रकील पर्वतमाथि पहुँच स्थापित गरे जहाँ इन्द्र प्रकट भएका थिए र इन्द्रले अर्ज...
अविवाहित पुरुष किन विवाहित महिलाप्रति आकर्षित हुन्छन (यस्तो छ १० कारण)
काठमाण्डौ । एउटा अविवाहित पुरुष विवाहित महिलाप्रति बढी आर्कर्षित हुन्छ । झट्ट सुन्दा अच्चम्म लाग्छ । पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ । तर विभिन्न अध्ययन, घटना र तथ्यलाई हेर्दा पत्याउनु करैलाग्छ । सामान्य युवतीलाई भन्दा विवाहित महिलालाई पुरुषहरुले बढी आँखा लगाउँने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि यो अध्ययनको निष्कर्ष नजिक देखाउने घटनाहरु घटिरहन्छन् । केहि दिन अगाडी गौ...
समुन्द्र किनारमा ओसामा विन लादेनको हुलिया फेला, देख्नेहरु तीनछक्क परेर हैरान
कहिलेकाँही अचानक यस्तो अवश्था आइलाग्छ कि पत्याउनै नसकिने तर ठ्याक्कै मिल्ने अनुहारसँग नजर ठोकिन पुग्छ त्यस्तै यौटा घटना घटेको छ,पहिले देख्दा अचम्म परेका यिनीहरु यस्तो कसरी हुन सक्छ ? भनेर अचम्म परे तर अफगानिस्तानका कुख्यात आतंककारीका नेता ओसामा विन लादेनको अनुहारसँग ठ्याक्कै मिल्ने अनुहार समुन्द्र किनारमा एक बस्तु हात लागेको छ । लादेनको अनुहारसँग मिल्ने उक्त बस्तु इग्लेंडका एक महिलाका ...